नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी समितिमा को को ? – KarnaliPost Daily
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी समितिमा को को ?
३ जेष्ठ २०७५, बिहीबार १३:१३ May 19, 2018 by Karnali Post Daily
स्थायी समिति ४५ सदस्यीय, सचिवालय ९ सदस्यीय
काठमाडौँ । नेपालको इतिहासमा एमाले र माआवादी केन्द्रबीच ऐतिहासिक एकता भएको छ । दुई कम्प्युनिस्ट पार्टीबीच भएको एकताले नेपाल राजनीतिमा नयाँ युगको सुरुवात भएको छ ।
एकतापछि शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी हुनेछ । नयाँ पार्टीको ४५ सदस्यीय स्थायी समिति हुनेछ । स्थायी समितिमा एमालेबाट २६ र माओवादीबाट १९ हुनेछन् । ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति हुने हुनेछ । केन्द्रीय कमिटिमा एमालेबाट २४१ र माओवादीबाट २०० जना रहनेछन् । ९ सदस्यीय सचिवालय बनाइएको छ ।